Bhadhara Yako Bhiri. Ruzivo rweMudzidzi Zvemari »Hodges University
Hodges Yunivhesiti Hofisi yeVadzidzi veMari Zvemari inopa nyanzvi dzakazvipira kuti dzibatsire iwe nerubatsiro rwemari, maakaundi evadzidzi, uye mhinduro dzemabhuku.
The basa yeHofisi yeVadzidzi Vezvemari Zvemari ndeyekuve mudzidzi mubudiriro wezvemari-anotariswa apa achipa iwo akanyanya mwero webasa uye akaenzana mukana mukupihwa kwemari. Isu tinowedzera mikana yekuwana nekukwanisika nekupa ruzivo rwakakwana rwemari uye kutungamira kwakasarudzika nerutsigiro rwevadzidzi nemhuri mumamiriro ezvinhu anosanganisira kubatana pamwe nekubatana.
ZveMari Zvekubata Ruzivo
Kuti udzidze zvakawanda nezve Rubatsiro rwemari, seyemubatanidzwa / yakazvimiririra yemudzidzi zvikwereti, federal / nyika zvipo, FAFSA, uye FA verification:
Runhare - (239) 938-7758
Kuti uwane ruzivo maererano Maakaundi evadzidzi, inosanganisira muripo / fizi muripo, kubhadhara, zvirongwa zvekubhadhara, wechitatu-bato kubhadharisa, kudzorera, mafomu 1098-T, nezvimwe.
Runhare - (239) 938-7760
Kuti ubatsirwe Mabhuku Ekugadzirisa, senge izvo zvekudzidzira kosi (epanyama mabhuku, e-mabhuku, mapindiro makodhi), zviwanikwa fizi, uye odha simbiso.
Runhare - (239) 938-7770
Hodges Yunivhesiti Resource Fee FAQs.
Yazvino Resource Fee Mutengo
Unoda Kuita Kubhadhara?
Bhadhara Yako Tuition uye Mari
Online - kubhadhara kunogona kuitwa nekadhi rechikwereti (MasterCard, VISA, kana Discover) kana nekutariswa nemagetsi nekuenda ku myHUgo.
tsamba - cheki kubhadhara kunogona kutumirwa kuOfisi yeVadzidzi veMari Zvemari, 4501 Colonial Blvd. Fort Myers, FL 33966. Ndokumbirawo usvise yako ID ID nhamba pane cheki. Ndokumbirawo usatumire tsamba kubhadhara mari (isu tinogamuchira nemufaro kubhadhara mari mumunhu).
Phone - kiredhiti kadhi (MasterCard, VISA, kana Tsvaga) kana yemagetsi cheki kubhadhara kunogona kuitwa nekufona (239) 938-7760.
Mumunhu - gadzira kiredhiti kadhi (MasterCard, VISA, kana Tsvaga), cheki, kana kubhadhara mari mukati-munhu nekuenda kuHofisi yeVadzidzi veMari Zvemari iri muNaples kana Fort Myers macampuses.
Dzidzo & muripo wekubhadhara zvirongwa zviripo kune variko veHodges University vadzidzi. Zvirongwa zvekubhadhara zvinogona kusanganisira mari yechikoro, mari yechirongwa / mutsauko, kosi mubhadharo, murabhorari fizi, uye zvimwe zvinomanikidzwa fizi. Ndokumbira kuti ubate nyanzvi account yeakaundi mukati meHofisi yeVadzidzi veMari Zvemari nekufona (239) 938-7760, kutumira tsamba sas@hodges.edu, kana kushanyira edu Naples kana Fort Myers macampuses kuti udzidze zvakawanda nezvezvirongwa zvekubhadhara.
Dzidzo Yekuda Mazuva
Yese kubhadhara kuri kukodzera, zvizere, nezuva rekutanga rekirasi yekutanga pamwedzi mina-kana mwedzi mitanhatu kunyorera (UPOWER ™ chete). Kuti uwane rumwe ruzivo, ndapota ona pazasi.
Kana iwe uri kushandisa chirongwa chekubhadhara, ndokumbira ubvunze neyemudzidzi account nyanzvi maererano nemisi yakatarwa yemubhadharo wega wega.
Ndokumbira utarise: Kubhadhara kuri kukonzerwa nenguva yakatarwa kuti ugamuchire chirevo zuva risati ratarwa.
Vadzidzi Vachigamuchira Rubatsiro rweMari
Vanogamuchira rubatsiro rwemari vanofanirwa kuti maakaundi avo aongororwe uye atenderwe neHofisi yeVadzidzi veMari Zvemari mari isati yapihwa. Kana rubatsiro rwemari rwakagadziridzwa, iwe unogona kunge une chikwereti chekudzoserwa kwakapihwa kuFederal department reDzidzo kana Florida Dhipatimendi reDzidzo zvichibva nemari yekutanga yekubatsira yakapihwa.
Kugadziriswa kune rubatsiro rwemari kunogona kuve mugumisiro wekushandurwa kwemaawa echikwereti, shanduko mukukodzera kwemudzidzi kune mamwe marudzi erubatsiro, kana kutadza kusangana neKugutsa Kunogutsa Kufambira Mberi (SAP).
Vadzidzi vanogamuchira rubatsiro rwemari rwakaputirwa neChinyorwa IV che1992 Yedzidzo yepamusoro Mutemo vanobvisa zviri pamutemo vanogashira mari inoenderana neDzidzo yepamusoro Amendments ya1998.Yunivhesiti yeHodges ichaona kuti Mutero IV rubatsiro rwakapihwa nemudzidzi uye asina kuwana panguva iyoyo. yekubvisa zvakakwana. Huwandu hwerubatsiro rwunowanikwa rwunoverengerwa pane yakarongedzwa hwaro.
Ruzivo rweMudzidzi Refund
Kurega kana Kudonhedza Makosi
Mudzidzi anogona kubvisa chero chikonzero uye ane basa rekupedzisa iyo Yunivhesiti yepamutemo nzira dzekuregedza sezvakatsanangurwa muParedhiyo Policy. Uye zvakare, kana mudzidzi akanyoreswa kuburikidza nepamhepo yepamhepo portal, ibasa remudzidzi kuti abvise kuburikidza neiyo imwecheteyo online online portal.
Kuregererwa kunofungidzirwa kuti kwakaitika pazuva iro mudzidzi anotumira zviri pamutemo fomu rekuregedza kana musi iyo Yunivhesiti inogadza kuti mudzidzi akamira kuenda kana kutadza kusangana nemitemo yakaburitswa yedzidzo uye inobviswa zvine hunyanzvi, chero chinouya kutanga.
Kuti uwane rumwe ruzivo nezve Yunivhesiti yekubvisa marongero, ndapota ona Catalog Yunivhesiti.
Sezvo kosi yega yega inotanga yako yekutanga mwedzi mwedzi (4-mwedzi nguva), yako rubatsiro rwemari kukodzera ichaongororwa zvichibva pane chako chinzvimbo chinzvimbo kuti uone kana / kana rubatsiro rwemari rwakapihwa uye kana / kana mudzidzi achizogamuchira mari. Chinzvimbo chemudzidzi chekunyoresa chinoenderana nemaawa echikwereti mavakanyoresa zvakanyanya.
Vadzidzi vanofanirwa kuziva kuti ivo havazogashira mari yekudzoserwa kusvika zvese muripo uye muripo muripo akabhadharwa zvakakwana. Yekutanga chero kiredhiti inogona kuburitswa paakaundi account yemudzidzi ichave anokwana mazuva makumi matatu nemaviri mushure mechikoro uye mubhadharo muripo wabhadharwa zvakazara.
Mari Yekubatsira Kukodzera
Ndokumbira kuti uone iyo Yekunyoresa Mamiriro Ekutungamira pazasi kuti uongorore rubatsiro rwemari kukodzera kunoenderana neanoshanda maawa echikwereti:
Pasina-Kupfuura Hafu-Nguva Hafu-Nguva ¾ Nguva Nguva izere
Kushanda Kwechikwereti Maawa 1 - 5 6 - 8 9 - 11 12 kana kupfuura
Federal PELL Grant * ¼ Zvinokodzera ½ Zvinokodzera ¾ Zvinokodzera Kukwana Kwakazara
Federal SEOG * Hazvibvumirwe ½ Zvinokodzera ½ Zvinokodzera Kukwana Kwakazara
State EASE Grant * Hazvibvumirwe Hazvibvumirwe Hazvibvumirwe Kukwana Kwakazara
Nyika FSAG * Hazvibvumirwe Hazvibvumirwe Hazvibvumirwe Kukwana Kwakazara
Zvikwereti zveFederal * Hazvibvumirwe Kukwana Kwakazara Kukwana Kwakazara Kukwana Kwakazara
* Zvinoenderana nekodzero yemudzidzi yemubatanidzwa / nyika rubatsiro rwemari.
Ndokumbira kuti uone kudzoreredzwa uye rubatsiro rwemari kuburitswa zuva ruzivo pane iyo Yevadzidzi Zviitiko Karenda mu myHUgo.
Tsvaga Zvakawanda Nezve Mari Rubatsiro
Mitero Yemubhadharo Wedzidzo Yepamusoro, Uchishandisa Iyo 1098-T Fomu Yemutero
Mukana weAmerica (yaimbove Tariro) uye Hupenyu Hwose kudzidza mutero zvikwereti zvinogona kuwanikwa kwauri kana iwe uchibhadhara yepamusoro dzidzo mutengo. Kuti ikubatsire iwe kutora zvikwereti izvi, Hodges University ichaisa iyo 1098-T fomu yemutero neInternal Revenue Service (IRS) naKurume 31 wegore rega.
Ruzivo urwu haruna nzira inomiririra kuraira kwemutero kubva kuyunivhesiti, sezvo riri iro basa remubhadhari kuona kukodzera kwechikwereti. Ndokumbirawo usataure Hodges University maererano nezano remutero rechikwereti ichi. Kuti uwane rumwe ruzivo nezve American Mukana uye Hupenyu Hwose kudzidza mutero makadhi, ndapota tarisa kune IRS Kuburitswa 970 - Mutero Mubatsiro weDzidzo yepamusoro kana kubata Internal Revenue Service zvakananga pa (800) 829-1040. Pamibvunzo chaiyo ine chekuita neruzivo rwunopihwa mukati meiyo 1098-T fomu yemutero, ndapota nyorera Hodges University pa (239) 938-7760.
1098-T Mutero Fomu FAQs
Kana sangano, risiri remudzidzi kana nhengo yemhuri (s), razvipira kubhadhara mari yekudzidzira yemudzidzi, vanoonekwa seyechitatu-bato anotsigira neHodges University. Kana muripo uchifanira kuakaundi yemudzidzi, iye anotsigira anobhadhariswa neYunivhesiti. Iyi nzira yekubhadhara inoonekwa seyechitatu-bato kubhadhara.
Mari dzevatsigiri dziri pasi peiyo yakafanana federal yekuzivisa zvinodiwa seimwe rubatsiro rwemari. Kumwe kutsigira hakudi invoice yekubhadhara uye inotungamirwa neyunivhesiti kuburikidza neHofisi yeVadzidzi veMari Zvemari.
Kunyangwe iwe uri mudzidzi kana anotsigira, iwe unowana mhinduro mumibvunzo inowanzo bvunzwa (FAQs) nezve mashandiro anoita wechitatu-bato uye mashandisirwo anoitwa. Kana iwe uine mimwe mibvunzo kana uchida rumwe ruzivo, ndapota nyorera Hofisi yeVadzidzi Vezvemari Services pa (239) 938-7760 kana sas@hodges.edu.
Chechitatu-Bato Kubhadhara FAQs kune Vanotsigira
Yetatu-Bato Kubhadhara FAQs yeVadzidzi
BankMobile, Chikamu cheVatengi Bhengi, inogadziridza mari yemubhadharo yemudzidzi yeYunivhesiti yeHodges pamwe nemamwe masosi epamusoro epamusoro muUnited States. Kuti uwane rumwe ruzivo nezve BankMobile, shanyira iyi link.
Click pano kuona kontrakiti yesangano redu neBankMobile, Chikamu cheVatengi Bhengi.